Screen kudhinda / kudhinda pane zvipfeko → Professional screen kudhinda pane zvipfeko
Screen kudhinda ndiyo imwe yenzira dzinozivikanwa kwazvo dzekumaka dzinowanzo sarudzwa kushambadzira t-shirts, bhurauzi kana zvimwe zvigadzirwa zvekushambadzira zvakaita se mabhegi kana nguwani. Mhando iyi yekudhinda inoshanda zvakanyanya kumatunhu mahombe uye akapfava pamwe nemachira matete, kusiyana kombasi yemakomputaiyo inokurudzirwa kune madiki magiraidhi uye zvishandiso zviri zvishoma mukobvu uye zvinorema.
Screen yekudhinda - yakanaka kune hombe magiraidhi pane sandara nzvimbo
Graphics, logo kana chinyorwa chakagadzirwa nemhando yepamusoro kudhinda kwescreen kunenge kusinga gadzike kwete kungoshandisa chete, asi zvakare kugeza pane yakanyanya tembiricha. Iyo nzira inodhura inoshanda yekumaka maererano nehunhu hwayo. Yekutsikisa kwechidzitiro, skrini inoshandiswa, uko iyo pendi inopararira pamusoro pese mesh nachiremba chiremba. Iyo pendi inorova jira inosunga zvachose uye inonyura mukati mayo.
Chikwata chedu chinopa chero chakasarudzwa logo kana zvakanyorwa nekudhinda kwechiso.
Matrix yekudhinda kwechidzitiro
Mhando dzakasiyana-siyana dzekudhinda screen
Mukana mukuru wekudhinda kwechidzitiro kugona kugadzira Graphics mune ese mavara. Paunenge uchigadzira chinyorwa pazvipfeko, iwo magiraidhi mu w yakasimba uye inoratidzira mavara.
Imwe yekuwedzera mukana ndeye sarudzo ye shading. Iyo pendi inogona kusanganiswa neimwe neimwe. Zvirongwa zvemakomputa zvakatsaurirwa kune yekusanganisa pendi maitiro anonyatsoverenga iyo grammage yeinodiwa pigment kuti iite iro rakanyatso nyatso iro rinozoiswa kune icho chigadzirwa.
Screen yekudhinda inopesana nekuwacha, inogona kushambidzwa mune otomatiki yekuwachisa michina ine spin spin Mamiriro acho ndeyekudhinda kwakakodzera nezvose zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
T-Shirt ine skrini-yakadhindwa mifananidzo
Mutengo wekudhinda chinovhara kunoenderana nekutenderera
Mari yekudhinda skrini inoenderana nekuedza. Ndicho chikonzero nei zviri nani kuti uzvisarudzire iwo maodha makuru. Kugadzirirwa kwematrix imari yakatarwa, yakazvimiririra nekuedza.
Zvakare, kana tichida kugadzira chiyero chemuenzaniso T-shati kana bhegi, isu tinofanirwa kufunga nezve mutengo kugadzirira matrix. Mune ino nzira yekudhinda, rimwe nerimwe ruvara rinoshandiswa zvakasiyana, kuburikidza nechakasiyana skrini.
Inouya nekugadzirira matrix yakasarudzika yemuvara wega wega. Nekudaro, hazvina basa zvakanyanya nekuwanda kwekuedza. Inoshanda chaizvo nemadhora makuru ezviitiko zvemitambo, mibairo yemakwikwi kana zvikwata zvakawanda zvevashandi.
Kugadzikana kwekudhinda kwechidzitiro
Screen yekudhinda inokweretwa nekududzirwa kwayo kwakawanda, inogona kushandiswa kumaka donje uye zvigadzirwa zvepurasitiki, uye kunyangwe kutemera huni. Screen yekudhinda inowanzo sarudzwa kune zvipfeko uye kushambadzira machira. Iwo ma prints anopesana nemuchina kukuvara, zuva uye unyoro.
Tinokukoka iwe kushandira pamwe nesu signature ane makore mazhinji echiitiko mukumaka kushambadza uye zvipfeko zvebasa. Tine zvigadzirwa zvakasiyana siyana, uye timu yedu ichafara kukubatsira iwe kusarudza uye maitiro ekudhinda.
Logo T-shirtsT-shirts ine yakadhindwakudhinda paT-shirtspurinda pane zvipfekochinyorwa chekupfekazvipfeko zvine logozvipfeko zvine screen screenzvipfeko zvakanyorwaPolos ine zitakudhinda screenkuchinjisa thermombatya dzakadhindwa